Soomaali mayd ahaan looga tegay oo lagu daaweynayo Turkiga - Awdinle Online
Soomaali mayd ahaan looga tegay oo lagu daaweynayo Turkiga
Ciiddanka Ilaaladda Xeebaha Turkiga waxay sheegeen inay maydadka 3 qof ka heleen meel ka baxsan Xeebta Degmadda Kesme (Cesme), halka ay 3 kalena soo badbaadiyeen.
Wasiirka Arrimaha Gudaha Turkiga, Suleyman Soylu waxa uu ku eedeeyey Ciiddanka Ilaaladda Xeebaha ee dalka Giriiga inay garaaceen ilaa 7 Muhaajiriin, isla markaana ay Muhaajiriintaasi oo aan haysanin doonyaha badbaadada (A lifeboat) ay ku tuureen Badda meel ka baxsan Jesiiradda Chios oo wax ka yar 8 KM ka baxsan Xeebta Turkiga.
Qoraal uu Wasiir Suleymaan Soylu soo dhigay Bartiisa Twitter-ka ayuu ku sheegay in Ilaalada Xeebaha Giriiga ay 7 Muhaajir ka qaateen wixii hanti ah oo ay wateen, iyagoo gacmaha ka wada xireen, kuna tuureen Badda iyagoo aan wadanin Jaakadaha Badbaadada (Life jackets) iyo Doonyo.
Muhaajiriinta la soo badbaadiyey waxaa ka mid ah Labo Muwaadin oo Soomaali ah, oo lagu kala magacaabo Axmed Cadnaan Muxamed iyo C/salaam Bah, kuwaasi oo haatan lagu daaweynayo Isbitaalka Dowladda ee Urla State Hospital ee magaalladda Izmir ee dalka Turkiga.
Axmed Cadnaan oo Saxaafadda kula hadlay Isbitaalka waxa uu
sheegay inay isaga iyo 6 kale ay 3 maalin ka hor ka shiraacdeen Degmadda Kesme ee Turkiga, iyagoo gaaray Jesiiradda Chios ee dalka Giriiga.
Waxa uu intaasi ku daray inay Jesiiraddaasi joogeen 2 maalin, ka hor intaysan Ciiddanka Ilaaladda Xeebaha Giriiga jir-dilin, hantidii ay wateen ka qaateen, kadibna ay Badda ku soo tuureen.
Afhayeenka Ilaalada Xeebaha ee dalka Giriiga, Nikolaos Kokkalas oo la hadlay Wakaalladda Wararka Turkiga waxa uu beeniyey inay Muhaajiriinta si xun ula dhaqmeen amaba ay dad khatar geliyeen.
Dowladda Turkiga iyo Hay’adaha u dooda Xuquuqda Aadanaha waxay horey u cambaareeyeen Ficilada Giriiga ee ay Muhaajiriinta dib ugu soo celiyaan Badda, taasi oo xadgudub ku ah Qiyamka Aadminimada iyo Sharciyada Caalamiga ee Khatar-gelinta nolosha dadka taagta daran oo ay ku jiraan Haween iyo Carruur.
Previous articleDowladda oo Maanta Ciidamo horleh geysay Gobolka Gedo+Sawiro
Next articleDowladda oo waqti kale ku dartay xayiraadaha Coronavirus